Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ihe kachasị mma site n'ihe odide arịlịka, jide n'aka na ị na-eji ha eche echiche. A ghaghị ekesa ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị na njupụta ziri ezi. Ha kwesịkwara ịbụ ndị dị nkenke ma dị mkpa maka ọdịnaya dị na ma jikọta na icheta ibe. Ụdị arịlịka Spammy bụ tiketi kpọmkwem iji penalization dị ka ndị ahụ bụ arịlịka ndị na-adịghị ada ụda n'ime ederede. Ejila ihe odide arịlịka dị otú ahụ n'ime ọdịnaya gị dịka ha ga-emerụ gị SEO Source .